100% yemahara Linux kugoverwa | Kubva kuLinux
100% yemahara Linux kugoverwa
La FSF zvine hungwaru nezve izvo zvinogoverwa zvinoonekwa 100% Kodhi Yemahara o Yakavanzika Software.
Ivo vane runyorwa, nezvipo zvavanofunga kuti zvine hunhu uhu.
Uku ndiko kugovera GNU / Linux pane zvatinoziva kuti vane gwara rakasimba ravanozvipira kuisa uye kupa chete yemahara software. Izvi zvinogoverwa zvinoramba zvisiri zvemaapplication, mapuratifomu epuratifomu, madhiraivha, uye firmware. Kana vakasanganisira chero nekutadza, vanobviswa. Kana iwe ukawana isiri yemahara software kana zvinyorwa mune izvi zvakagoverwa, unogona kuimhan'ara uye uwane GNU Bucks mukuita. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve chii chinoita yemahara GNU / Linux kugovera, ndapota ona yedu gwara rekugovera kwemahara.
Ivo vakasarudzwa mune ino kesi ndeaya:
BHUKU Linux: kugoverwa kweGNU / Linux kunoenderana naFedora.
Dragora: GNU / Linux yakazvimiririra yekuparadzira inoenderana nepfungwa yekureruka.
Dynebolic: Kugoverwa kweGNU / Linux kunoisa kwakanyanya kusimbisa odhiyo uye vhidhiyo kugadzirisa.
gNewSense: Kugoverwa kweGNU / Linux kunoenderana neDebian neUbuntu, inotsigirwa neFSF.
Musix GNU / Linux: Distribution yakavakirwa paKnoppix, iine kukoshesa kwakanyanya mukugadzirwa kweodhiyo
Parabola GNU / Linux: Arch-based kugovera inotungamira zviri nyore system uye package management.
Trisquel: Kugoverwa kweGNU / Linux kwemabhizinesi madiki, vashandisi vepamba uye nzvimbo dzekudzidzisa.
UTUTO-e: Kugoverwa kweGNU / Linux kunoenderana neGentoo. Yakanga iri yekutanga yemahara yemahara yeGNU / Linux kuzivikanwa inozivikanwa neGNU Project.
Venenux: GNU / Linux kugovera kwakavakirwa kutenderedza iyo KDE desktop.
Ndinozviona zvichishamisa kuti Debian haisi pane ino zvinyorwa. Ungaonga sei gNewSense yakavakirwa pa Debian y Ubuntu. Kuda kuziva nezve izvo izvo Debian Squeeze inouya ne 100% yemahara kernel uye chete nemapakeji kubva kuru. Asi zvakadaro.
Kutaura nezve zvakanakira nekuipira kungave kunopokana. Ini ndinofunga izvi zvinoenderana nemushandisi wega wega, mafungiro avo nezvinodiwa, saka ndinovasiya kwauri. Chii chatinofanira kukoshesa?
Dzimwe Hardware dzinogona kusashanda sezvazvinofanira kuita nemutyairi kuvhurwa.
Kune rimwe divi isu tingave ne100% yakavhurwa sosi OS.
Zvisinei, sezvandaitaura, pane yako sarudzo. Neraki ini ndapinda Debian Ini ndaizongofanira kubvisa kubva kune zvinyorwa. Nyora iyo don, isina-yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » 100% yemahara Linux kugoverwa
Ini ndanga ndichizokuudza iwe Debian asi yakataurwa.
Zvisinei hazvo madistros ndeevanyanyisi, Debian kwete nekuti inoshanda kumaseva asi mamwe anoita
Debian haipo nekuti ine isina-emahara marekodhi anowanikwa uye anovaratidza iwo, ini handizive kana iri evanyanyisi, ndinofunga ndeyevaya vanoziva mutsauko pakati pemahara software uye yakavhurwa sosi uye vanosarudza iyo yekutanga, kwaziso
Asi izvo ndezvekuti kana Debian akakurudzira kusvetukira mutsime, iwe ungazviita here? Zvakare, ini handirangarire izvi zvinyorwa zvinokurudzirwa chero kupi, chinhu choga chandinorangarira kubva kuDebian 6 chiziviso ndechekuti kana iwe uine chero nyaya dzaigona kushandiswa. Asi chiuya, ini handioni icho sechirevo pane se.
kana Debian akakurudzira kuti upinde mutsime, ungazviita here?
Aiwa murume, ndakatanga ndapfeka life jacket, oxygen tank nezvimwe 😀
Kwete, iro ibasa rangu, kana iwe wafa hafu ini ndinomutsidzira iwe kana ini ndichinzwa nezvazvo uyezve, kubhadharisa kuti ini handishande nekuda kwounyanzvi hahaha
Hahahaha .. Ipapo ini zvirinani ndikande ini kuti ndife .. Ipapo iwe unoda kundinunura nechikwata chinoshandisa Arch, uye zvaunotanga kuzvimisa, ndinofa hahahaha
LOL!!!!! HAHAHA !!!!! chaizvo, zvinosetsa kwazvo chirevo JAJAJAJA !!!!
Zvakanaka, chero bedzi iri timu yeArch uye kwete Debian Unstable kana Ubuntu vhezheni yazvino, handifunge kuti kune matambudziko akawanda, zvirinani kuti paisazove nematambudziko makuru ekusagadzikana handiti? HAHAHA !!!!
Ini ndaifanirwa kusvetuka vanyengeri .. Hapana munhu akakuisa mukununura uku, uye zvirokwazvo, naDebian Unstable kana Ubuntu, ivo vachandiponesa nekukurumidza kupfuura neArch.
HAHAHAHAHAHA huya, ndanga ndichivimba kuti waitoziva pandaive ndichiseka HAHAHA.
Ini handisi kuyedza kutanga yakajairika Arch VS Debian nhaurirano, muchokwadi ... ndiri kuzotumira posvo ndichiti matambudziko andinayo muArch, kana iwo andakave nawo ndichaona 😀
Nah kana zvikasatora nguva yakareba kudaro kuisa, kana uchida ini ndinokununura neHasefroch ...
Hei uye nei usingaite hurukuro yeDebian Vs Arch mune chinyorwa? Ikoko kana iwe uchigona kuuraya
Na, pandinenge ndichida kumuuraya ini ndinoisa tarisisa pamusoro wake, kana ndosaka ndine iye padhuze neni 😀
Nekuti hauna ini, kana usinga ...
Zvakaipa iwe hauna mukana wekuti Tishandise Linux, dai ndisina kuigadzira kuti iwe ugone kurwa zvishoma
Ini handione chero chakaipa neaya purist emahara software distros, asi ini ndinoshandisa proprietary software, nekuti ini ndakatenga iyo nvidia mifananidzo, kuve nemagiraidhi ari nani akakosha redundancy uye muridzi wekutyaira anondipa mashandiro akanaka.
Pane chero munhu anoziva kana Parabola iri KISS?
Mufananidzo hongu ndinenge ndave nechokwadi
Kunyangwe iri distro yakachena, Trisquel akaona zvese Hardware zvakakwana; apo distros dzakakurumbira senge Fedora, Ubuntu, Suse uye Linux Mint 11 (zvese neGnome) hazvitombo shandira ini pane live cd. Iyo ine zvakare imwe runako uye inoratidzika kunge yakanaka.
Chinyorwa chakanaka, ndatenda nebasa rako.
MMM. Ndiri kuda kuziva 😀
Hora: Ini ndanga ndichifunuka 🙁
Iyo yakatanga kugadzirwa seDebian-yakavakirwa kugovera, asi masosi ezvinyorwa akachinjirwa kuUbuntu nekuburitswa kweshanduro 2.0, muzhizha ra2008. Iyo purojekiti inochengetera zvinyorwa zvaro, zvinotorwa kubva kune chikuru uye Ubuntu "zvakasikwa", asi neese software yekambani yabviswa.
Kwete zvachose, mufaro wechokwadi kufadza vaverengi vedu 😀
Ini ndinoshandisa Trisquel uye inoenda zvakakwana.
Pindura kuna CaptainSpiff
Ini ndinofunga debian haina kusanganisirwa nekuti, kunyange hazvo debian inozvivanza pachayo nenyaya yekuti izvo zvinopihwa uye zvisiri zvemahara hazvisi zvinyorwa zvaro zvepamutemo, mune dzimwe nguva mugadziri pachawo anopa mukana wekumisikidza iwo.
Yakaburitswa Caledonia 0.9.8 Beta 1.0
Ubuntu Hardware Certification timu yekuhaya vashandi vatsva